Hevitra momba ny vokatra e-varotra: antony 7 antony maha-tena ilaina ny famerenana an-tserasera amin'ny marikao. Martech Zone
Alatsinainy Janoary 14, 2019 Alakamisy, May 7, 2020 Juliette Anderson
Mety nisy nahatsikaritra ny fomba lasa mihabetsaka ho an'ny orinasa, indrindra ho an'ireo eo amin'ny sehatry ny e-varotra, ny fampidirana ireo hevitra ao amin'ny tranonkalany. Tsy tranga lamaody io, fa fampandrosoana efa voaporofo fa mahomby tokoa amin'ny fahazoana ny fitokisan'ny mpanjifa.
Fa orinasa e-varotra, zava-dehibe ny fahazoana ny fitokisan'ny mpanjifa, indrindra ireo voalohany, satria tsy misy fomba hahitan'izy ireo ireo vokatra amin'ny tena asany. Betsaka ny mpanjifa no misalasala mividy amin'ny fivarotana an-tserasera kely kokoa satria toa tsy dia atokisana intsony izy ireo raha ampitahaina amin'ireo mpilalao lehibe kokoa.
Ny iray amin'ireo fitaovana manampy amin'ny firesahana an'io dia ny fijerena an-tserasera, ary ireto manaraka ireto no sasany amin'ireo antony tsara indrindra tokony hampiharanao azy amin'ny tranokalanao:
Maninona no ilaina ny famerenana an-tserasera amin'ny marikao
Ny tsikera an-tserasera dia mitondra fividianana - Ny antony voalohany maha-zava-dehibe ny fananan'ny marika anao famerenana an-tseraseradia ny fitaomana ny olona hividy. Averina indray fa ilaina indrindra ho an'ny mpividy voalohany izany satria tsy mbola nanana traikefa tamin'ny orinasanao ianao. Koa satria ny tsikera an-tserasera dia manatsara ny porofo ara-tsosialy, ary satria ny tsikera an-tserasera dia avy amin'ny mpanjifa hafa, ny mpanjifa vaovao dia mety handinika azy io ary hividy. Ireo mpanjifa voalohany dia miantehitra tanteraka amin'ny valin-kafatra avy amin'ny mpanjifa izay manana traikefa aminao, ary raha manome toky ampy ny valiny dia azo inoana fa ireo mpividy voalohany dia mora kokoa mamita ny fividianany.
Mahatonga anao ho visibl bebe kokoa ny hevitra amin'ny Internete - Ny fijerena an-tserasera dia atiny misy azy manokana. Ny atiny dia mbola iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana, noho izany ny fananana atiny amin'ny endrika dinihana an-tserasera dia afaka manampy anao hita miharihary kokoa ny marikao. Ny tena mahafinaritra azy dia avy amin'ny mpanjifanao izany ka tsy mila mandany ezaka bebe kokoa amin'ity faritra ity ianao. Angamba ny fanamby eto fotsiny dia ny famporisihana ny mpanjifanao hanome ny heviny ary manantena izy ireo fa hanome ny tsara.
Ny fijerena an-tserasera dia mahatonga anao ho azo itokisana -Ny lohalaharana amin'ny maha-zava-dehibe ny famerenana an-tserasera dia ny fampiroboroboana ny fahatokisana ny marika anao. Tena marina fa sarotra ny mahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa voalohany, indrindra raha tsy malaza be ny marikao. Amin'ny fananana fanamarihana an-tserasera, miasa ianao hanatsara ny fahatokisana ny marika. Hamarino tsara fa manao izay fara herinao ianao hahazoana vola farafaharatsiny ho an'ny orinasanao amin'ny ankapobeny, ary koa manampy sary vokatra avo lentaary ny tolotra satria ny fanadihadiana dia naneho ny fiatraikan'ny kintana ambany noho ny kintana efatra amin'ny fiatraikany ratsy eo amin'ny orinasa sy ny fahafahan'ny vokatra mahazo ny fitokisan'ny mpanjifa amin'ny ho avy. Saingy aza ajanona mihitsy ny naotinao - tsy misy fotony io ary tsy tokony handray an'io lalana io mihitsy ianao.
Manitatra ny resaka momba anao ny tsikera an-tserasera - Ny zavatra tsara iray hafa momba ny tsikera an-tserasera dia ny manampy amin'ny fanaparitahana ny teny amin'ny marikao. Ny fanamarihana tsara nataon'ny mpanjifa, indrindra rehefa asongadin'ny tranokalanao, dia ampirisiho ireo mpanjifa ireo hizara azy ireo amin'ny tambajotram-pifandraisana, mamela ny marikao handeha hatreto. Ka manaova ny tsara indrindra vitanao mba hanasongadinana ny hevitry ny mpanjifa tena tsara, ary manazàra mamaly ireo tamberina ireo koa. Mety ho tsara koa raha toa ka mihoatra ny tranokalanao ny ezaka ataonao hanehoana ny hevitry ny mpanjifa. Ataovy manerana ny fantsom-barotra amin'ny media sosialy. Amin'ity fomba ity dia mety kokoa amin'ny mpanjifa ny mizara an'io.
Ny famerenana an-tserasera dia tena ilaina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra - Ny fahafantarana ny maha-zava-dehibe ny famerenana amin'ny Internet dia azonao antoka fa tokony ho ampahany amin'ny paikadim-barotrao izy io. Zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny mampiditra an'io rehefa mamorona ny fampielezan-kevitrao. Tokony horaisinao ho toy ny fampielezan-kevitra samirery ny hevitrao amin'ny Internet, hamoahana paikady samihafa izay mikendry ny fanamafisana ny fahaizanao mahazo valiny tsara sy hampitombo ny valiny. Raha azo atao, andramo koa ny mampiditra azy amin'ny fampielezan-kevitra hafao. Miezaha hamorona gimikika tena mahasarika toy ny fifaninanana izay hanomezan'ny mpanjifanao hevitra tsara indrindra momba ny vokatrao. Tsy maintsy mahazo valiny be dia be ianao amin'ity fomba ity.
Ny fijerena an-tserasera dia misy fiatraikany lehibe amin'ny varotra - Na dia voalaza aza fa misy fiatraikany amin'ny fividianana ny tsikera an-tserasera, ary noho izany dia voatery hisy fiantraikany tsara ny varotra, tsy mihoatra izany fotsiny ny ampitomboy ny varotrao. Ny tsikera an-tserasera dia tsy vitan'ny hoe mandresy mpividy voalohany, fa manatsara ny tsy fivadihan'ny marika, mamela ny mpanjifanao hanohy hiasa miaraka aminao. Ary raha mbola manome vokatra sy serivisy manana kalitao ianao dia hanohy handray valiny tsara ary hitohy ny tsingerina. Zava-dehibe ny hifanarahanao amin'ny fanoloran-tenanao amin'ny kalitao. Amin'ny fanaovana izany dia azonao antoka fa hampisondrotra hatrany ny varotrao.
Manome anao tsipika misokatra ho an'ny mpanjifa ny hevitra amin'ny Internet - Ary farany, ny tsikera an-tserasera dia fantsom-pifandraisana amin'ireo mpanjifanao. Ary ny etikety maoderina dia mitaky orinasa hamaly. Tsy jerena izany na tsara na ratsy ny fanehoan-kevitra. Na dia tena mahafinaritra sy mora aza ny mamaly ny hevitra tsara dia ilaina ihany koa ny mamaly ny ratsy. Tsy maintsy asehonao amin'ny mpanjifanao hafa ny fomba ahafahanao miatrika ny hevitra ratsy atolotry ny mpanjifanao. Averina indray, tsy mahazo mandahatra ny valiny omen'ny orinasao ianao. Ny tokony hataonao dia ny mifanatrika amin'izy ireo. Tsy maintsy porofoinao fa mihazona mafy ny raharaham-barotrao ny orinasanao.
Miasa amin'ny hevitrao amin'ny Internet hanamafisana ny marikao
Ny antony etsy ambony dia hazavao mazava ny antony maha-zava-dehibe ny fampiasan'ny orinasanao hevitra momba ny Internet. Raha mbola tsy manana ianao dia alao antoka fa manomboka izao ianao. Raha efa nanao ianao dia alao antoka fa miasa bebe kokoa aminy ianao mba hahafahanao mampitombo ny tombo-tsoa azonao avy aminy. Ilaina ny fananana hevitra amin'ny Internet ho an'ny orinasanao. Tsy azo ifampiraharahana izany ka alao antoka fa mampiasa azy io araka izay tratry ny ananany ianao.
Tags: mpanjifafanapahan-kevitrae-varotraFanamarihana an-tserasera
Juliette Anderson dia manam-pahaizana momba ny vondrom-piarahamonina Outreach ho an'ny orinasan-tserasera e-commerce izay manampahaizana manokana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpivarotra an-tserasera izay manana lanjan'ny 5+ pounds na mihoatra. Miara-miasa amin'ireo magazay e-varotra izy mba hahatratrarana ny varotra lenta mandritra ny efa-taona. Ny mampiavaka azy dia ny marketing amin'ny media sosialy sy ny fampiroboroboana karama.